အနာဂတ်တွင် ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသော ဆူပါကြိုးမျှင်သီအိုရီ မှန်ကန်ခဲ့ပါက စွမ်းအားအများဆုံးအရှိန်မြင့်စက်များ၌ တွင်းနက်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြေသည် ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ယင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိစ္စသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း LHC တွင် မောင်းနှင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူထုကြား စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ LHC Safety Assessment Group ကမူ စိုးရိမ်ဖွယ်မရှိဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ အကယ်၍ တွင်းနက်ကို ဖန်တီးပါက ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော ဘက်ကစတိန်း-ဟောကင်း သီအိုရီအရ တွင်းနက်သည် လျင်မြန်ဆန်စွာ အငွေ့ပျံသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့အရမူ အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အကယ်၍ အရှိန်မြင့်စက်သည် တွင်းနက်များကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက ကော့စမစ်ရောင်ခြည်များသည် အဆပေါင်းများစွာ ထုတ်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
↑ Livingston၊ M. S.; Blewett၊ J. (1969)။ Particle Accelerators။ New York: McGraw-Hill။ ISBN 1-114-44384-0။
↑ Humphries၊ Stanley (1986)။ Principles of Charged Particle Acceleration။ Wiley-Interscience။ p. 4။ ISBN 978-0471878780။
↑ "Atom smasher"။ American Heritage Science Dictionary။ Houghton Mifflin Harcourt။ 2005။ p. 49။ ISBN 978-0-618-45504-1။
↑ Hamm၊ Robert W.; Hamm၊ Marianne E. (2012)။ Industrial Accelerators and Their Applications။ World Scientific။ ISBN 978-981-4307-04-8။
↑ "Two circulating beams bring first collisions in the LHC" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ CERN Press Office။ November 23, 2009။ 2009-11-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ An Interview with Dr. Steve Giddings။ Essential Science Indicators။ Thomson Reuters (July 2004)။ 16 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Heilbron၊ J.L.; Robert W. Seidel (1989)။ Lawrence and His Laboratory: A History of the Lawrence Berkeley Laboratory။ Berkeley: University of California Press။ ISBN 0-520-06426-7။
Ragnar Hellborg (ed.), ed. (2005)။ Electrostatic Accelerators: Fundamentals and Applications။ Springer။ ISBN 978-3-540-23983-3။ CS1 maint: extra text: editors list (link)
Fred's World of Science Archived5March 2008 at the Wayback Machine.
Annotated bibliography for particle accelerators from the Alsos Digital Library for Nuclear Issues Archived7October 2010 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမှုန်အရှိန်မြှင့်စက်&oldid=705541" မှ ရယူရန်